Soo-saaraha Shiinaha iyo Badeecad Balaadhan Meesha
Balaastiig xad dhaaf ahwaa habka wax taaj oo kale duritaanka gaar ah, kaas oo loo isticmaalo in lagu daro qaybo ka mid ah laba qalab hal qayb iyada oo loo marayo wax taaj oo kale duray. Labada qaybood ayaa laba jeer lagu mideeyey qaabab kala duwan iyo mashiinno wax lagu duro oo la isku duro.
Caag ka samaysan wax taaj oo kale ah waa geedi socod lagu meeleynayo mid ama in ka badan oo qaybo caag ah oo ka mid ah walxaha kala duwan in lagu shubo caaryada duritaanka kahor cirbadeynta, ka dibna caag la isku duro oo la geliyo caaryada, daboolka maaddada la isku duro ama lagu duubo qaybaha loo diyaariyey si loo sameeyo hal qayb oo keliya.
Talaabada ugu horeysa: diyaarso qeybta horay loo dhigay. (Mold1)
Tallaabada labaad: ku dheji horay-u-dhigista caaryada duritaanka, oo ku samee wax-ka-beddelka cusbada caagga ah. (Mold2)
Qaybta ugu dambeysa ee balaastigga ah
Waxaa jira laba nooc oo wax ka sameysma
Nooca 1aad: Qaybaha / qaybaha horay loo dhigay waa caag, oo horay loogu sameeyay qaab kale. Habkani wuxuu ka tirsan yahay wax lagu duro laba-cirbadood oo duritaan ah. Kani waa caag ka samaysan wax taaj oo aan halkan kaga wada hadalnay.
Nooca 2: Qaybaha horay loo dhigay maaha caag, laakiin waxay noqon karaan bir ama qaybo kale oo adag (tusaale ahaan qaybaha elektaroonigga ah). Waxaan ugu yeeraynaa howshan wax taaj oo kale ah.
Badanaa qaybo horay loo sii diyaariyey ayaa qayb ahaan ama gebi ahaanba daboolay alaabada ku xigta (qalabka balaastigga ah) ee habka wax-u-dhiska ee xad-dhaafka ah.
Ma taqaanaa dalabka balaastigga wax ka sameynta?
Waxaa jira ujeedo badan oo caag ah oo ka sameysmaya wax ka sameysashada. Kuwa ugu badan ee iyaga ka mid ah waa kuwa soo socda:
1. Ku dar midab si aad u qurxiso muuqaalka (saamaynta aesthetic).
2. Sii qayb ku habboon haynta qaybta.
3. Ku darida aag jilicsan qaybaha adag si loo kordhiyo dabacsanaanta iyo taabashada dareenka.
4. Ku dar waxyaabo laastik ah si aad ugu daboosho badeecada ama aad ugu xirtid biyo-caddeyn.
5. Badbaadso waqtiga isku imaatinka. Looma baahna in la isku xiro qaybta birta iyo qeybta balaastigga ah gacanta ama si otomaatig ah. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad gashaa qeybta qalabka mashiinka oo aad kudartaa qeybta balaastigga ah. Looma baahna in la isu geeyo haba yaraatee.
5. Meel ku dheji qaybta kale adigoon isticmaalin xargaha ama xabagta.
Nooc noocee ah ayaa balaastig ka sameysmaya wax ku habboon?
Nidaamka balaastigga ah ee xad-dhaafka ah wuxuu ku habboon yahay alaabooyin badan, oo ku kala duwan xaaladaha gaarka ah ee alaabooyinka. Badanaa waxaa ka mid ah burushka cadayga, qalabka gacanta lagu qaato (sida leyliska xad-dhaafka ah iyo wiish-baareyaasha) iyo alaabada daryeelka shakhsiga ah (sida dhalooyinka shaamboo iyo shaarbayaasha), boosteejada siligga, fiilooyinka, kuwa haysta SIM, iwm.
PC & TPU overmolding kiiska biyuhu
PC & TPU overmolding albaabka batteriga biyuhu
PC & PC / ABS kiiska balaastikada ah ee balaastigga ah ee alaabada elektarooniga ah
PC & TPU kiiska difaaca ee xad dhaafka ah ee moobaylka
Laba midab oo baaxad weyn oo balastar weyn leh
ABS & TPE gawaarida xad dhaafka ah
Waa kuwan qaar ka mid ah tusaalooyinka caadiga ah ee codsiyada wax laga beddelo:
1. Caag adag oo daboolaya balaastigga - ugu horreyntii, qayb caag ah oo adag oo horay loo sii dhigay ayaa la sameeyaa. Kadib balaastiig kale oo adag ayaa lagu durayaa dusha ama hareeraha qaybaha horay loo dhigay. Balaastikadu way ku kala duwanaan karaan midab ahaan iyo / ama cusbi.
2. Balaasti adag oo lagu duubay cusbada elastomer jilicsan - marka hore, qaybo balaastig ah oo adag ayaa horay loo sii dhigay. Ciridka elastomer-ka (TPU, TPE, TPR) ayaa markaa lagu mideynayaa ama hareerayaa qeybaha horay loo dhigay. Tan waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo aagga gacanta jilicsan ee gacanta adag ee qaybaha adag.
3. Bir caag ah oo la duubay - ugu horreyntii, saldhigga birta waa la farsameeyay, waa la tuuray ama waa la qaabeeyey. Kadibna, qaybaha horay loo dhigay ayaa la geliyaa daloolka caaryada cirbadaha, balaastigana waxaa lagu shubay birta ama hareeraheeda. Tan waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu soo qabto qaybaha biraha ee qaybaha balaastigga ah.
4.Elastomer dusha ka daboolaya Birta - Marka hore, qaybta birta waa la farsameeyay, la tuuray ama waa la qaabeeyey. Qaybaha birta ah ee horay loo dhigay ayaa markaa la gelinayaa caaryada cirbadeynta iyo cusbada elastomer-ka ayaa lagu durayaa birta ama hareeraheeda. Tan waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo jilicsan, dusha si fiican u qabsaday.
5. Qalabka loo yaqaan 'elastomer resin soft' oo lagu duubo PCBA ama qalabka elektarooniga ah, module-ka soo baxa iftiinka, iwm
Waxaa muhiim ah in la ogaado in ay jiraan xoogaa xaddidaad ah iyo dhibaatooyin iswaafajin u dhexeeya waxyaabo kala duwan oo u baahan in laga fiirsado isku shaandhaynta. Kuma koobna laba nooc oo qalab ah. Waxaan aragnay qaar ka mid ah alaabada, qayb ka mid ah seddex meeris oo balaastig ah oo kala duwan oo la isku daray si loo gaaro dusha midabbo badan oo isku dhafan. Halkan waxaa ah tusaale fudud oo ah shey aad aad ugu baran doontid: maqas.
Badanaa, qalabka qeybta hore ama qeybaha horay loo dhigay waxaa lagu ridayaa wasakhahaasi cirbadeynta, waqtigaas oo miiqyada balaastigga ah ee xad dhaafka ah lagu durayo ama hareerahooda qeybaha horay loo dhigay. Marka walaxda la soo geliyay ee la daboolay la qaboojiyo oo la bogsiiyo, labada maaddadood ayaa la isku daraa si loo sameeyo qayb aan muhiim ahayn. Tilmaamo dheeri ah: Had iyo jeer waa fikrad fiican inaad haysato qaybahaaga horay loo dhigay iyo qalabka duubaya si farsamo ahaan loogu qabto. Sidan oo kale, labada maadadood ayaa la isugu dari karaa oo keliya kiimiko ahaan, laakiin sidoo kale jir ahaan.
Waa maxay faa'iidada ay leedahay wax ka badashada wax soo saarka?
Wax ka samaynta wax taaj oo kale ah waxay leedahay qaab dhismeed fudud iyo geedi socod dabacsan.
1. Waxay ku habboon tahay qaybaha leh qaybo ballaaran oo ded ah, gaar ahaan qaybaha leh guntinta la rogay. Noocyada balaastiigga ah ee noocan ah way adag tahay in lagu duro isla mashiinka wax lagu durayo oo leh laba midab oo midab leh, taas oo lagu gaari karo caag daboolan oo wax lagu duro.
2. Marka qaabka hore ee balaastiggu u yahay mid fudud oo cabirkiisu aad u yar yahay, qaybta ugu dambaysana ay leedahay cabbir weyn, waxay ku habboon tahay in la korsado
caag daboolay wax taaj oo kale. Waqtigaan, caaryada qaybta hore ee caaryada waxaa lasameyn karaa caaryar aad u yar ama caw badan, taas oo si weyn u yareyn karta qiimaha caaryada.
3. Marka qaybaha horay loo dhigay iyo walxaha xiran ay yihiin dhamaan balaastikada (resins), waxaa la soo jeedinayaa in habka wax isku shaandheynta laba-cirbadoodka ah loo adeegsado wax soo saar tiro halkii laga badin lahaa si loo helo tayo sare, wax soo saar sare iyo qiimo jaban. Marka wax soo saarka Dufcaddii yar ama shuruudaha tayada ma aha sare, overmolding waxaa loo isticmaali karaa si looga fogaado maalgashiga ee mashiinka wax taaj oo kale laba-duritaanka iyo qiimaha sare ee wax soo saarka caaryada.
Maxay yihiin waxyaabaha ay yihiin qeybaha horay loo dhigay oo ka sameysan?
Waxaan ugu yeernaa qeybihii ugu horreeyay ee lagu shubay caaryada qaybo horay loo dhigay (ama qaybo horay loo dhigay).
Qaybaha horay loo dhigay waxay noqon karaan wax kasta oo qaybo adag ah, qayb bir ah oo mashiin ah, qayb caag ah oo la sameeyay, ama xitaa badeecad jirta, sida lowska, fur, ama isku xiraha elektarooniga ah. Qeybahan horay loo sii meeleeyay ayaa lagu dari doonaa balaastiigyada la isku duro kadib si ay u sameeyaan hal qeyb oo ah ficil kiimikaad iyo isku xirnaan farsamo. Elastomer resins (TPU, TPE, TPR) sidoo kale waa balaastigyo, laakiin kuma haboona inay ahaadaan qaybo horay loo dhigay.
Sidee loo doortaa xarkaha balaastigga ah ee wax ka samaynta?
Weelasha balaastikada ah ee loo isticmaalo wax ka sameysmidda badankood waa caagag. Waxay ku bilaabmaan qaab jajab ah, heerkulkooduna dhalaalayaa badiyaa wuu ka hooseeyaa kuwa horay loo meeleeyay si looga hortago in qaybo horay loo sii dhigay ay waxyeeleeyaan heerkulka sare. Qaybahaas waxaa lagu qasaa waxyaabo lagu daro sida midabbada, wakiilada xumbada iyo buuxiyo kale. Kadibna waa lagu kululeeyaa barta dhalaalida oo lagu duraa caaryada dareeraha ahaan. Waxaa jira xoogaa xaddidaad ah oo ku saabsan walxaha ku habboon wax ka samaynta. Haddii qeybaha horay loo dhigay ay yihiin qaybo bir ah, waxaad u isticmaali kartaa wax caag ah wixii ka weyn. Dhibaatooyinka is waafajinta ayaa jiri kara haddii qaybta horay loo sii meeleeyay laga sameeyay cusbi kale oo caag ah (caag ama TPE) oo leh barta dhalaalka oo hooseeya.
Miyaad ogtahay mashiinka wax lagu duro ee duritaanka in ka badan wax ka sameynta?
Mashiinka wax lagu duro ee loo adeegsado balaastikada wax lagu shubo ayaa ah mashiin caag ah oo wax lagu duro, oo loo qaybiyo laba nooc: mid toosan iyo mid toosan.
1. Mashiinka wax taaj oo kale ee duritaanka toosan wuxuu ka fadhiyaa meel ka badan mashiinka wax lagu duro ee duritaanka ah ee isla xajmiga, taas oo aan sahlaneyn in la ilaaliyo, sidaa darteed culeyska ayaa badanaa ka yar. Gaar ahaan ku habboon qaybaha cabbirka yar yar ama qaybaha horay loo dhigay ma fududa in lagu hagaajiyo wasakhahaasi.
2. Mashiinka wax lagu shaandheeyo ee Horizontal wuxuu leeyahay culeys ballaaran iyo meel bannaan oo yar, taas oo ku habboon sameynta qaybo baaxad weyn leh.
Sidee loo doortaa mashiinka wax lagu duro ee cirbadaha loogu talagalay
1. Mashiinka wax taaj oo kale ee duritaanka tooska ah waxaa badanaa loo isticmaalaa qaybo yaryar sida silsiladaha fiilooyinka iyo isku xirayaasha, fiilooyinka korantada, muraayadaha indhaha iwm. Caaryaduhu waa kuwo fudud oo hufan.
2. Mashiinka wax lagu duubo ee duritaanka ah waxaa loo isticmaalaa qaybo baaxad weyn leh, oo leh awood ku filan isla markaana u janjeera dhanka shaqada.
3. Labada midab ee wax lagu duro ee midabaynta leh ayaa lagula talinayaa qaybaha horay loo meeleeyay iyo qalabka la duubay, taas oo ku guuleysan karta tayo iyo wax soo saar ka wanaagsan kan wax lagu duubo oo la duubay.
Caaryada cirbadaha ee wax ka samaynta wax ka badan
Isku-xoqiddu badanaa waxay leedahay laba nooc oo wasakhahaasi ah oo laysku duro. Mid ayaa loogu talagalay wax ka sameynta qaybta horay loo meeleeyay, mid kale ayaa ah qeybta ugu dambeysa ee xad dhaafka ah.
Marka qaybaha horay loo dhigay ay yihiin kuwa aan caag ahayn ama aan u baahnayn wax isku duro, kaliya hal xirmo oo wasakh ah ayaa loo baahan yahay. Waxaan ugu yeeraynaa howshan wax taaj oo kale ah.
Shirkadda 'Mestech' waxay khibrad u leedahay wax ka sameynta makiinadda caagga ka sameysan, gaar ahaan caagga lagu muday balaastigga ee qolofka alaabada elektaroonigga ah iyo kuwa korontada ku shaqeeya oo ay ka mid yihiin qalab horay loo sii qorsheeyay. Mestech sidoo kale waxay ku qalabeysan tahay mashiinno wax lagu duubo oo laba-midab leh, oo soo saari kara noocyo kala duwan oo qaybo caag ah oo laba-midab leh, qaybo caag ka sameysan oo caag ah iyo wax isku duro oo la isku duro. Haddii aad u baahato, fadlan nala soo xiriir.
Hore: Tilmaamaha loogu talagalay naqshadeynta iyo balaastiga qeybaha saxda ah
Xiga: Qurxinta Qurxinta-IML